Kwenziwe ngokwezifiso ishaja yamandla wesekethe weBhodi, Abakhiqizi nabahlinzeki - Dongguan Changsen Electronic Technology Co., Ltd.
Ikhaya > Imikhiqizo > Ishaja Power Circuit Board > Ishaja Power Circuit Board
Sizibophezele kumashaja wesifunda wamabhodi wamandla. Le nkampani inamakhono aqinile we-R & D, imishini yokukhiqiza ethuthukile kanye nesistimu eqinile yokulawula ikhwalithi, engaqedela ukwakheka komkhiqizo, ukukhetha izinto nokuthengwa, ukuqhutshwa kwensimbi ye-SMT nomhlangano owenziwe ngemuva kokushisela, izinsizakalo ezihlanganisiwe njengokuhlolwa kokusebenza nokuguga zinganikeza ngokwezifiso amabhodi wesekethe we-adaptha yamandla ahlukahlukene wangaphandle.
Sizibophezele kumashaja wesifunda wamabhodi wamandla. Le nkampani inamakhono aqinile we-R & D, imishini yokukhiqiza ethuthukile kanye nesistimu eqinile yokulawula ikhwalithi, engaqedela ukwakheka komkhiqizo, ukukhetha izinto nokuthengwa, ukuqhutshwa kwensimbi ye-SMT nomhlangano owenziwe ngemuva kokushisela, izinsizakalo ezihlanganisiwe njengokuhlolwa kokusebenza nokuguga zinganikeza ngokwezifiso amabhodi wesekethe we-adaptha yamandla ahlukahlukene wangaphandle. Sikhonza izimakethe ezingaphansi ezihlanganisa iYurophu, iMelika kanye neMpumalanga Ephakathi, sibheke phambili ekubeni ngumlingani wakho wesikhathi eside eChina ...
1. Amapharamitha webhodi yesekethe yokuphakelwa kwamandla kagesi:
Ishaja yamandla wesifunda ibhodi
I-5V1A ibhodi lesifunda lokufaka i-voltage 220V okukhipha i-voltage 5V ishaji eqondile Inqubo yokuhola
2.Features kanye nezicelo ishaja Amandla wesifunda:
I-1 engine, unjiniyela wamukela ukwakheka okuzinzile kochungechunge lokuphakelwa kwamandla, futhi amapharamitha wokukhipha amandla webhodi lesifunda aqhubeka ngokuqinile ukuvimbela ukwehla kwamandla kagesi ekulimaleni impilo yomkhiqizo.
Uma kucatshangelwa ukuqina, ibhodi lesifunda lithenga izinto ezifanelekile zokunikezwa komkhiqizo, liqhuba amahora angama-720 ngaphandle kokuphazanyiswa kokuphakelwa kukagesi nokuguga, futhi liqinisekisa ukuqina. Ibhodi lesifunda lihlonyiswe ngebhokisi lefyuziutomatic, namandla kagesi aphezulu noma isekhethi elifushane lokuvikela okuzenzakalelayo.Ngemva kokuphepha, ibhodi lesifunda liyalulama lisebenze ngokuzenzekelayo.
Ama-Circuitboards asetshenziswa kumaselula, amakhompyutha, izinto zasendlini, ama-routers, ama-humidifiers neminye imikhiqizo ye-elekthronikhi.
Ukwethulwa okuningiliziwe kwebhodi yesifunda yokuphakelwa kwamandla kagesi:
IZINGUQUKO CO., Ltd
Imikhiqizo emihle, betterservice
Ukuqokwa kanye Ukukhetha (China, USA / Japan, Europe, njll
Incazelo yebhodi lesiketi esiphrintiwe
Kungenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende
Izinto ezintsha zobuchwepheshe
Ukuhlolwa kwekhwalithi yekhwalithi
1ï¼, Ibhodi le-Thecircuit selidlulise isitifiketi sikazwelonke sobuchwepheshe, i-FCC / UL
2ï¼, Ngomkhiqizo wethu ngamunye, sizoklama imishini yokuhlola ezinikele. Wonke umkhiqizo uvivinywa ngokomzimba. Hhayi ukuhlolwa okungahleliwe.
Lesi ngesinye semishini yokuhlola umkhiqizo:
1 boards ‰ Amabhodi ejikelezayo ejwayelekile ayatholakala futhi angathunyelwa ngosuku olufanayo.
2ï¼, Customprinted wesifunda ibhodi izinsuku ezingu-7 ukuphuma kwesampula.
Uma nje usitshela izidingo zakho zokusebenza, onjiniyela bethu bazokunikeza izixazululo zokwakha, zokuthuthukisa nezokukhiqiza. Singakwazi ukuklama ibhodi lesifunda lanoma iluphi uhlobo nosayizi. Sesiqede amashumi ezinkulungwane zamabhodi wesifunda, futhi siyazi ukuthi singawaklama kanjani futhi siwakhiqize kanjani. Imikhiqizo ye-elekthronikhi idinga amabhodi wesifunda angahambelani. Ukukhiqizwa kwethu kwebhodi lesifunda konke kuyizintambo zokukhiqiza ezizenzakalelayo ngokuphelele. Ingakunika ngemikhiqizo enekhwalithi ezinzile nokusebenza okungaguquguquki. Ukusungula ubudlelwano bokubambisana besikhathi eside akusizi ekugcineni ikhwalithi yomkhiqizo ozinzile nezinsizakalo zobuchwepheshe ezilandelwayo.
Inkampani yethu ikakhulukazi yenza amabhodi wesifunda angajwayelekile angatholakali kalula. Izithombe ezikwi-Intanethi ngamasampuli athile esiwa-odile amakhasimende.
1ï¼, Inkokhelo indlela: inkokhelo engu-30% kusengaphambili, ibhalansi ekhokhelwe ngemuva kokuthunyelwa.
3ï¼, Uma ungawazi umkhiqizo, sicela uye egumbini lethu lokubuka ukuze ubone isampula, uqinisekise futhi u-ode, ikhwalithi ilungile uku-oda, ukulethwa uma kukhona umehluko phakathi komkhiqizo futhi isampula ingakusekela ukubuya nokushintshaniswa, izinga lisuselwe kwisampula!
Nikeza amakhasimende isixazululo esingcono kakhulu senani lentengo yokusebenza kwezentengiso, ukulandelela ngenkuthalo ukusayina inkontileka, ukulethwa kwempahla nokusiza amakhasimende ukuxazulula ubunzima.
1. Uma kuyinkinga yekhwalithi yomkhiqizo uqobo, kuholela ekungenelisekeni. Sizosiza ikhasimende ukuxazulula inkinga ngokushesha okukhulu ngesikhathi se- isikhathi okuvunyelwene ngaso.
2. Uma umkhiqizo ungeke usetshenziswe ngokujwayelekile ngenxa yezici zomuntu.Sichaza ikhasimende imbangela yenkinga, okukhombisa ukuthi le nkinga ayimboziwe ngewaranti yethu, bese sinikeza ezinye izixazululo kumthengi ngokwenkinga yekhasimende.
Amathegi ashisayo: Ishaja Yamandla Esifunda IBhodi, elenziwe ngokwezifiso, iFektri, Abenzi nabahlinzeki